replica Beautiful la laba repaints iyo dhawaaqyada caadada, model tayo sare leh si ay u hadda soo bixi!
Vickers VC10 waa diyaarad ku long-range British loogu talagalay iyo dhisay by Vickers-Armstrong (Diyaaradaha) Ltd, duulimaadkeedii ugu horeeyay uu ahaa at Brooklands ee Surrey ee 1962. Diyaaradaha ayaa waxaa loogu talagalay in ay ku shaqeeyaan on dariiqyada fogee xawaare subsonic iyo sidoo kale laga awood hawlaha adag iyo sare sare oo ka madaarada Afrika. Fikradda hore ee VC10 ahaa si ay u bixiyaan diyaarad ku shaqeeya by nuclear ah in si raaxo leh ku raaxaysan karaan runways gaaban caadi ah in la isticmaalo waqtiga. waxqabadka ee VC10 ahaa sida in ay gaareen isgoyska ugu dhaqsiyaha badan ee Atlantic (London iyo New York), rikoor weli lagu qabtay inay taariikhda for diyaaradaha a subsonic, kaliya Concorde ku supersonic ahaa dhakhso.
VC10 waxaa inta badan marka la barbar dhigo Ilyushin Il-62 (USSR), labada dayuuradood waa qaabeynta afar-engine oo keliya dib a. In July 2012, 8 VC10 ku sii adeega sida diyaaradaha gami anteenada la Air Force Royal ah, hawlgabka qorsheeyay bishii March 2013
Author: David Maltby
Fairchild City Air Metroliner III Rakaabka FS2004